ဖုန်းတစ်လုံး ရေထဲ ကျသွားတဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ~ (IT) ကိုထိုက်
ဖုန်းတစ်လုံး ရေထဲ ကျသွားတဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
4:40 AM ဖုန်း ဗဟုသုတ No comments
ဖုန်းတစ်လုံး ရေထဲ ကျရင် ပျက်တာ များပါတယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း ဆိုင်ပြန်မပို့ရပဲ အလိုလို ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မိမိ သုံးနေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးသာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေထဲကျသွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အိမ်မှာနေရင်း ဖုန်းက ရေထဲ ကျသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ပေါက်ပေါက် ရှာရှာ အိမ်သာခွက်ထဲ ကျတဲ့ သူတွေတောင် ကြံဖူးပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ လုံးဝ မလုပ်ရမယ့် အလုပ်က ပါဝါ ဖွင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရေထဲ ကျသွားပြီ ဆိုရင် ရေဘယ်လောက်ပဲ နှစ်နှစ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ တိမ်တိမ်၊ နည်းနည်းပဲ စိမ်စိမ်၊ များများပဲစိုစို ပါဝါလုံးဝမဖွင့်မိဖို့ အရေးကြီး
ဖုန်းရဲ့  ဘက်ထရီကို ဖြုတ်လိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း ဘက်ထရီနဲ့ ဖုန်းက တစ်ဆက်တည်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့လည်း မဖြုတ်ယုံပဲ ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ဘက်ထရီက သက်သက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘက်ထရီတင်မကပဲ SIM ကဒ်ကိုလည်း ဖြုတ်ရ ပါမယ်။ ဒါမှ SIM ကဒ်မှာ မှတ်ထားတဲ့ Contact များ မပျောက်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Micro SD ကဒ်လည်း ထိုနည်းတူစွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြုတ်လို့ရတာ မှန်သမျှ အကုန် ဖြုတ်ပေးရပါမယ်။
ရေငွေ့မြန်မြန်ပြန်မယ့် နည်းက နေပူအောက်ထားခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ဖုန်းကို လုံး ထိခိုက်စေပါတယ်။ နေရဲ့  အပူဒဏ်ကို ဖုန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ သတ္တုများက မခံနိုင်ပါဘူး ပိုလို့တောင် ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ရေငွေ့ အစုပ်မြန်တဲ့ နေရာတစ်ခုခုမှာ ထားရပါမယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ ကတော့ ဆန်အိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်အိုးထဲ နှစ်ထည့်ထားလိုက် ရင် ရေငွေ့ကို အမြန်ဆုံး စုပ်ပေးပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆန်စေ့များ မဝင်စေဖို့လည်း သတိထားရပြန်ပါတယ်။ ဒီမှာ လေမှုတ်စက်လည်း လုံးဝ အသုံးမပြုရပါဘူး။ လေမှုတ်စက်က အပူဒဏ်လည်း နေပူနဲ့ မခြားပါဘူး။ ပန်ကာနဲ့တော့ ရပါမယ်။ ဘက်ထရီကိုလည်း ထိုနည်းတူစွာ ပါပဲ။ နေပူထဲ လုံးဝ မထုတ်ပဲ ရေငွေ့စင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဥပမာ- အဝတ်ခြောက်၊ လက်ကိုင်ပုဝါ ခြောက်နဲ့ ထိုင်သုပ် ပေးတာမျိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေငွေ့ပြန်အောင် လုပ်တဲ့အဆင့်က အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက်တော့ ကြာပါတယ်။ ရေဝင်တဲ့ အတိုင်းအတာ အလိုက်၊ ရေငွေ့ပြန်နိုင် တဲ့ နှုန်းထားအလိုက် အချို့ ဆို ၂၄ နာရီကြာမှ ပြန်ဖွင့် ပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိဖုန်း ရေငွေ့ကုန်စင်မှု ရှိမရှိက မိမိရဲ့  ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်ပါတယ်။
အထက်ပါ ပြီးလို့ ဖုန်းရဲ့  ပါဝါကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကံကောင်းသွားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပါဝါ ပွင့်မလာဘူး။ မီးလင်းလာတော့လည်း Welcome ကနေ တက်မလာဘူး။ စက်က ထစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ တကယ် စိတ်မကောင်းစရာ ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် နီးစပ်ရာ ဖုန်းပြင်ဆိုင်တွေမှာ သွားရောက် ပြသနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို အထက်ပါနည်းက ဘာထူးလို့လဲလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ အများကြီး ထူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းကို ရေကုန်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်မှာ ပြင်တဲ့အခါ ပြန်အသက်ရှင်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ရေခြောက်ပြီး ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် ဆိုင်ကို တစ်ခေါက်တော့ သွားပြသင့်ပါတယ်။ အချို့ ဆို ရေတစ်ခါ ထိထားတဲ့အတွက် နောက်မှ touch အလုပ်မလုပ်တော့တာမျိုးတို့
ဖြစ်တတ် လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့  ရေစို
ဖုန်းများ မြန်မြန်အသက်ပြန်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ သို့တည်းမဟုတ် အပြင်မှာ သွားရင်း လာရင်း ဖြစ်တယ် ဆိုရင်လည်း အိမ်မှာရှိတဲ့ facility များလို အနီးစပ်ဆုံး နည်းလမ်းများကို အသုံြး့ပုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ကျတော့လည်း သွားရင်းလာရင်း ဖြစ်တတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့နေရာက ဆိုင်နဲ့နီးနေရင် ပိုတောင်အဆင်ပြေပါသေးတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်နေ့ကိုမိနစ် 30 အချိန်ပေးပြီး ငွေ...
ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိမထားမိသော အချက်လေးမျာ...
Root လုပ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ …? ဘာကြောင့် Android ကို ro...
ဖုန်းတစ်လုံး ရေထဲ ကျသွားတဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့ အချက်မ...
Chinese Mobile Phone Secret Codes
Jailbreak fake tools များ သတိထား
Mobile Network အကြောင်း
Offline GPS (အင်တာနက်မလို)
Android အစစ်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လို စမ်းရင်သိနိုင်မလဲ
ANDROID 4.2နှင့် အထက် OS များတွင် USB DEBUGGING MO...
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကို အမှန်အတိုင်း မြင်ရမယ့် Myan...
Virus ကာကွယ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်၂၃ ချက်
ကွန်ပျူတာကို ဝယ်ကာစလို မြန်စေချင်တယ်ဆိုရင်
Google မှာ အသံနဲ့အမိန့်ပေးပြီးရှာမယ်
Format Command အကြောင်း တစေ့ တစောင်း
Sony phone များကို Online ကနေ Firmware တင်နည်း
Windows7Manager 4.2.8 Final (24.06.2013)
မီဒီယာ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ထောင်မယ်ဆိုရင်
Access Denied ဆိုပြီး အနီရောင်ကြီးပေါ်နေသူများအတွက်...
Android Application တွေကို Full Version ဖြစ်အောင်လ...
Huawei C8813 and C8813D တွေမှာ Viber သုံးရင် အ၀င်အ...
Facebook အကောင့် ကို Comfirm Code မတောင်းအောင် ဖွင...
SIM Card အကြောင်း သိကောင်းစရာ
MTK Android Device ဆိုတာဘာလဲ
ATM အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ငွေထုတ်စက်အကြောင်း
Time မဂ္ဂဇင်းကပြောတဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Passwords တ...
2013 ခုနှစ် အမြန်ဆုံး Android Gaming Tablet6ခု (...
Putlocker မှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒေါင်းဖို့ Premium Lin...
အလန်းဇယားစစ်တိုက်ဂိမ်း Chrome SpecForce Full Versi...
Tango Text, Voice, and Video 2.10.48610
Survey အချို့ကို ကျော်ခွခြင်း How to Bypass Any Su...
မြန်မာတို့ရဲ့အလန်းတကာ့အလန်းဆုံး Shweyoe Dictionary...
Ubuntu Linux ကနေ Android ဖုန်းတစ်လုံးကို Root ဖောက...
Techspace နည်းပညာဂျာနယ် Volume2- Issue 13(26.06....
Viber ကနေ ကိုယ် ကိုမလိုချင်တဲ့ messages တွေ ph cal...
Transformers The Game Pc Full Version Game ( 212 M...
ကိုရီးယားတယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီ SK Telecom Co., မှ ကမ္ဘာ့...
GSM တယ်လီဖုန်းများအား အင်တာနက် မြန်နှုန်း တိုးမြှင်...
Android ဖုန်းတွေမှာ သူများ မမြင်စေချင်တဲ့ နေရာတွေက...
Android ဖုန်း မှာ Piano တီးမယ်....
Windows 8 သုံးသောသူများ သိစေရန်
Digital Life ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၇ (24.06.2013)
MTK Model တွေ အပါအဝင် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါင်း 2000ေ...
လေဆာကီးဘုတ် (Virtual Keyboard)
၁၅၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်များတွင် Ring Tune အသုံးပြုနည်း
Pattern Lock မေ့သွားရင် ပြန်ဖြည်နည်း
Android User တွေအတွက် Download Manager for Android...
ကလစ် ၂ ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ FULL ဖြစ်တဲ့ Wise Care 365...
Paypal မှ ပိုက်ဆံ Hack ချင်ပါတယ်ဆိုသူများအတွက် Pay...
မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို Password ပေးပြ...
UDF File System ဖြင့်ခွေကူးနည်း
Android Phone & Tablet Model ပေါင်း 1000 ကျော်ကို ...
ZIPPYSHARE မှ Download ချနည်း
PC Cleaner Pro 2013 11.0.13.6.14 + Serial Key
I Love Myanmar HD Animation Locker Theme 1 &2(6....
MP3 Media Converter for Android + MP3 Cutter
Andriod Application ရေးနည်း
မြန်မာယူနီကုဒ် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် မြန်မာလို ( EB...
Photoshop မှ PDF ပြုလုပ်ပုံ EBook ( မြန်မာလို )
ကွန်ပျူတာနဲ့ Guitar တီးခတ်နိုင်မယ့် Guitar Pro 6.1...
Facebook ရဲ့အသစ်တိုးလာတဲ့ "Trusted Contacts" ဆိုတာ...
Mipony Portable 2.0.5 (Premium account မရှိလို့ စိ...
iOS7ကို အဆင်ပြေပြေ၊ လွယ်လွယ်ကူကူ တင်နည်း
Clean Space v2013.05 + Patch
mSoccer Reader ဘောလုံးဝါသနာအိုးတွေအတွက် ဘောလုံးလော...
Digital Life ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၅ (10.06.2013)
Windows7Manager 4.2.7 + Keygen Core
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-6 (10.6.13)
Android ဖုန်းတွေမှာ Google Apps များသွင်းနိူင်ရန်
အင်တာနက် ဘယ်လို အလုပ် လုပ်သလဲ
Samsung တို့ ဘာကြောင့် Galaxy လို့ အမည်ပေးသလဲ
အသုံးများသော နောက်ဆုံးထွက် Software 100 ကျော် ရဲ့ ...
Code ထည့်စရာမလိုတဲ့ Viber v3.0.1.3 နောက်ဆုံးထွက် V...
ဟက်ကာ OS သို့မဟုတ် BackTrack OS
Facebook ပေါ်ကို ဓါတ်ပုံတွေ Video တွေ အမြန်တင်ချင်ရ...
CD,VCD,DVD တွေကို သူများ ကော်ပီ မကူးနိူင်အောင် ကာက...
ကလစ် ၂ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ဖူးဖြစ်တဲ့ IDM 6.15 build 14...
CCleaner 4.02.4115 Business(JUST DOUBLE CLICK)
War Bot Creation Guide Ebook ( မြန်မာလို )
Uniblue SpeedUp My PC 2013 v5.3.8.0 Multilingual +...
Install လုပ်ထားတဲ့ Android App တွေကို Backup/Resto...